Madaxweynaha dalka oo Kabete ka dhagax dhigay dhismaha isbitaal qaran | Star FM
Home Wararka Kenya Madaxweynaha dalka oo Kabete ka dhagax dhigay dhismaha isbitaal qaran
Madaxweynaha dalka oo Kabete ka dhagax dhigay dhismaha isbitaal qaran
Madaxweynaha dalka Mr. Uhuru Kenyatta ayaa maanta dhagax dhigay dhismaha isbitaalka guud ee lagu daweeyn doono dhammaan ciidamada ammaanka ee wadanka iyo bulshada.
Xaruntan caafimaad oo ah heerka 6-aad ayaa laga dhisayaa saldhigga ciidamada militariga ee deegaanka Kabete ee ismaamulka Kiambu gobolka bartamaha wadanka.
Isbitaalkan qaran ayaa sidoo kale sameyn doono cilmi baarista dhanka caafimaadka.
Mr. Kenyatta ayaa xusay in xarunta (KNRRH) ay qaadi doonto ilaa 700 oo ah sariiraha lagu seexiyo bukaannada.
Madaxweynaha Kenya ayaa dhanka kale sheegay inuu jiro qorsho lagu ballaarinayo isbitaallada qaran ee Kenyatta iyo Moi oo ku kala yaalla magaalooyinka Nairobi iyo Eldoret.
Madaxtooyada wadanka looga arrimiyo ee State House ayaa laga soo xigtay in marka la dhameystiro isbitaalka qaran ee maanta uu dhagax dhigay hoggaamiyaha dalka in lagu fulin doono adeegyada caafimaadka ee gaarka ah .
Mashruucan ayaa qayb ka ah barnaamijyada dowladda ee la xiriira caafimaadka guud oo ka mid ahaa ballanqaadyadii maamulka talada haya ee Jubilee xilligii ololihii doorashada.
Next articleDHAGEYSO:Saddex qof oo ku dhimatay dhisme ku dumay Kiambu